1. Saamaynta xawaaraha aad u dhakhsaha leh ee ku saabsan tayada goynta: * Waxay u horseedi kartaa awood la'aanta in la gooyo oo ay dhimbiillo shido; * Meelaha qaar waa la goyn karaa, laakiin meelaha qaar lama goyn karo; * Sababi in qaybta jarista oo dhami ay sii dhumuc weynaato, laakiin waxaa jira nabarro dhalaalaya; * Xawaaruhu waa mid aad u dhakhso badan, oo keenaya in xaashida b ...
Heerarka IEC waxaa loo isticmaalay in lagu tilmaamo thyristor, waxqabadka diode, wuxuu leeyahay dhowr toban xuduudaha, laakiin dadka isticmaala badanaa waxay isticmaalaan toban ama wax la mid ah, qodobkaan wuxuu si kooban u sheegayaa thyristor / diode ee xuduudaha ugu muhiimsan. 2.Average Forward Current IF (AV) (rectifier) ​​/ Micnaheedu yahay IT-da hadda jirta (AV) (Thyristor): waa ...
Cusbooneysiin ayaa socota
Nooca cusub ee mashiinka naqshadeynta jilitaanka qalabka semiconductor-ka waxaa laga aasaasay magaalada Runau dhawaan. Iyada oo gacan laga helayo barxadda jilitaanka horumarsan iyo tijaabooyin iyo falanqeyn isku dhafan, cilmi baaris qoto dheer oo ku saabsan qaab dhismeedka qalabka iyo aragtida aasaasiga ah ee la xiriirta ayaa la fuliyay ...